नेपाली सेनालाई अपमान गर्ने धृष्टता कसैले पनि नगरोस् - Anjuli Online Tv
नेपालको ईतिहासमा छुट्टै र गौरबमय ईतिहास बोकेको संस्था हो नेपाली सेना । यो पवित्र संस्थालाई विवादमा ल्याउन, कमजोर बनाउन र नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन देशी बिदेशी षड्यन्त्रकारीहरू क्रियाशिल रहेको जगजाहेरै छ । नाकाबन्दिमा सेना, भूकम्प, बाढिपहिरोमा, हुम्ला जुम्लामा बाटो खन्नुपर्यो, कोरोना भाईरसको दुःखमा औषधि ल्याउनु पर्यो, प्राकृतिक प्रकोपमा क्रियाशील र राष्ट्रिय बिपत्तिहरूमा आम मानिसले सदैव पुकार्ने नाम हो नेपाली सेना ।
देशलाई दुख्दा र गाह्रो पर्दा सबै जनताका बिपत्तिहरूमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर योगदान पुर्याएको छ सेनाले । एउटा सिपाहीको तलब कति हुन्छ ? ख्याल छ ? ब्यारेकभित्र कति दुःख छ थाह छ ? बाबु–आमा, श्रीमति, छोरा–छोरीको लालनपालन कति गाह्रो छ ? सिपाहिले छोराछोरी कसरी पढाएको छ थाहा छ ? परिवार कति दुःख ले चलाएको छ सोधेको छ कसैले ?
हिमालको चुचुराको छेउमा पुस माघको ड्युटिमा कसरी खटिएको छ सोच्या छ ? तराईको गर्मीमा सर्प लाग्ने जंगलहरूमा कसरी बस्या छ ? जाडोमा पालबाट तपतप चुहिने शीतलहरले छोएर कति सिपाहि बिरामी भएका छन् हेक्का छ कसैलाई ? राष्ट्रसेवा र देशका हरेक बिपत्तिहरुमा खट्दा कतिले वीरगति प्राप्त गरेका छन्, कति अंगभंग भएका छन् सहनूभूतिसम्म जनाएको छ कसैले ? खाली व्यारेकमा बसो खायो के काम छ सेनाको भनेको छ, खुईल्याएको छ, हेपेको छ । कति सहिनसक्नु भएको सेनाले राम्रो गरेको ? कति ईर्स्या र डाहा गरेको ? के सेना देशको सम्पत्ति होईन र ? के सेना हाम्रो गौरब होईन र ? के सेना नेपाल र नेपालीको शान, आस्था, बिश्वास र भरोसाको केन्द्र होईन र ? केहि गर्न खोजे किन सेना अग्रसर भएको भनेको छ ? ऐन कानुनको सिमाभित्र बस्दा के गर्यो सेनाले भनेको छ ? सीमा बिचिंदा किन जॉंदैन भनेको छ ? जान्छ सेना किन जॉंदैन सीमा बचाउॅंन, अवश्य जान्छ, समय आउॅंछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउॅंछु भनि यसको स्वामित्व लिनुभएको छ । नेपाली सेनाले सहयोग गरिरहेको छ । सेना संबिधान र कानूनमा बॉंधिएको जिम्मेवार संगठन हो । अरू जस्तो बकबक गर्दै हिड्न मिल्दैन सेनाले । देशद्रोहिहरू हो ! सेनाको बिरोध नगर्दा तिमीहरूको तलब नपाक्ला, चूलो नबल्ला तर मलाई पूरा बिश्वास छ, मेरो देशका प्रत्येक देशभक्त सिपाहिहरू देशको लागी आवश्यक परे बलिदान गर्न, देशका लागी जुनसुकै बेला जीबन समर्पित गर्न तयार भएर बसेका छन् ।
मलाई बिश्वास छ, अन्य कुटनैतिक माध्यमहरूद्धाा गाह्रो भएछ भने पनि सैन्य कूटनिति मार्फत हाम्रो देशको अतिक्रमित भूभागको रक्षा (फिर्ता), हाम्रो भूमिबाट बिदेशी सेना हटाउने र हाम्रो देशको स्वाधिनता रसार्बभौमसत्ताको रक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ । सबै मिलेर सेनालाई आँट, हिम्मत र साथ दिऔं, अहोरात्र देशका लागी समर्पित नेपाली सेनालाई सम्मान र ईज्जत गरौं अनि नेपाली सेनाप्रति गर्व गरौं ।
यो कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रमण र यसको महाबिपत्तिमा पनि जनताका लागी अग्र मोर्चामा लड्न तयार भएर बसेको सेनाको मनोबल गिराउने र सिंगो संगठनको बदनाम गराउने, भ्रम छर्ने काम कहिं कतैबाट नहोस् । खबरदार ! नियम कानुनको सीमाभित्र शान्तसँग ब्यारेकमा बसेर देशको सेवामा खटिईरहेको सेनालाई कसैले पनि जिस्क्याउने, होच्याउने र अपमान गर्ने हिम्मत नगरोस् ।
देशप्रति समर्पित हाम्रा वीर सैनिकहरूप्रति मेरो सलाम छ ।
(यो एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले देशका देशभक्त सिपाहिहरू माथि भएको अपमान सहन नसकेर लेखेको मेरो निजी बिचार हो– लेखक ।)
प्रकाशित मिति :जेठ ११, २०७७ आइतवार - ११:२०:२४ बजे